Maitiro ekuisa iyo Yakashinga webhu saiti paDebian uye Ubuntu | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa iyo Shinga webhu saiti paDebian uye Ubuntu
Makore akati apfuura apfuura webhu bhurawuza nyowani inonzi Brave yakaunzwa. Iri webhu bhurawuza rakagadzirwa nemumwe wevaimbove CEO veMozilla uye yaida kupa mushandisi mari yekushandisa nekufamba kuburikidza neBrave. Makore maviri gare gare, Akashinga browser akachinja zvakanyanya. Asi shanduko idzi dzakashanda kuva imwe chaiyo nzira kuGoogle Chrome.
Ushingi hunowanikwa kune zvese zvinogoverwa zveGnu / Linux uye mafoni eApple, saka isu tine mukana wekufananidza kufamba kwekombuta uye ne smartphone. Akashinga ane Chromium base iyo inobvumidza yakafanana neChannel asi ine shanduko dzinoverengeka dzinoita kuti ive inonakidza yewebhu browser yemushandisi wekupedzisira.
Imwe yesarudzo dzakashinga dzaBrave ndeye iyo shambadziro uye tracker blocker iyo ichatibvumidza isu kufamba nekukurumidza uye pasina zvinotsamwisa kana kushambadzira kushambadzira. Pamwe neiyi ad blocker, Akashinga anotibvumidza kuve neasingazivikanwe uye nekuchengetedzeka kwakachengeteka kubva kumatracker uye malware kuburikidza nekuvhura zvisina kuchengetedzeka. Uye munguva pfupi yapfuura, Akashinga akaisanganisira plugin inotibvumidza kubatanidza browser ne Bitcoin chikwama kuitira kuti tikwanise kushandisa maawa ekufambisa semaawa ekuchera. Chinhu chinoshanda chinoshandiswa nevazhinji vashandisi.
Parizvino tinogona gadza Akashinga paDebian uye Ubuntu akagoverwa nenzira mbiri. Yokutanga iine snap package chishandiso, kuiisa isu tinongofanirwa kuita zvinotevera mune terminal.
Mushure memaminetsi akati wandei webhu inozoiswa mukugovera kwedu. Imwe nzira iri kuburikidza neyekunze matura. Kuti tiite izvi tinovhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Webhu kubhurawuza neBrave ndeye kumhanya nekushandisa zviwanikwa haina kukwira seGoogle Chrome, izvo zvinoita kuti Brave sarudzo huru kune avo vanotsvaga chimwe chinhu chakareruka uye zvine simba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa iyo Shinga webhu saiti paDebian uye Ubuntu
MuLinux haisati yakakwenenzverwa, kwete kudaro mushanduro yayo yeApple, iyo, kunyangwe ichirema, iri mamwe emabhurawuza akanakisa epuratifomu ...
Pasina nzira yandakakwanisa kuiisa paMX Linux 17.1 x64
Mhoro kana uchinge uchine dambudziko kana mumwe munhu akauya pano uye chinhu chimwe chete chikaitika, chinyorwa hachina icho usati waisa apt-tora kuisa wakashinga iwe unofanirwa kugadzirisa zvinyorwa zvine apt-tora kugadzirisa. Shuwiro yakanakisa
Kutora kana zvekunze zvinyorwa? Zvichava izvo kwete.
Ini handina kukwanisa kuiisa pane linux mint 19, ndakaedza mirairo kubva pamapeji akasiyana, kusanganisira iyi, uye apt kuwana update zvakare.
Paradzanisa mirairo nekurova kupinda. Ndokunge, iwe paunosvika pamutsetse wekumira, pinda pinda uye unama unotevera kuraira pasi
Marvin Eduardo Bolaños Mojica akadaro
muna 2020 zvinoitwa seizvi
sudo apt kuisa apt-kutakura-https curl
curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key -keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/brave-browser-release.gpg wedzera -
echo "deb [arch = amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ solid main »| sudo tee /etc/apt/source.list.d/brave-browser-release.list
sudo apt shandisa yakashinga-browser
Pindura Marvin Eduardo Bolaños Mojica
Zvinoshamisa, mune arch ini ndakakwanisa kuisa zviri nyore kwazvo asi zvakadaro ndinoramba kuramba kuisa akashinga muna 20.04 ... ndinosvika panguva yekuisa uye ini ndinowana inotevera kukanganisa
«Iyo yakashinga-browser bhurawuza haiwanikwe, asi mamwe mapakeji mareferenzi
E: Iyo pasuru "yakashinga-browser" haina mumiriri wekuisirwa
Zvide!! Vese vandakakoka kuti vaedze uye vakaita saizvozvo vane chokwadiwo kuti ndicho chakanakisa. Iyo zvakare ine yakanaka kwazvo graphical interface. Inokurumidza kwazvo uye chakanyanya kukosha chinhu chakachengeteka chandakashandisa. Ndinorikurudzira nemaziso angu akavharwa. wakamirira chii?
Nicanor Rodil akadaro
Iko hakuna nzira yekuiisa pane MX Linux; Ini ndinowana kukanganisa:
E: Kupinda 1 zvisizvo zvakatsanangurwa mune runyorwa faira /etc/apt/source.list.d/brave-browser-nightly.list (Chinhu)
E: Izvo zvinyorwa zvinyorwa hazvigone kuverenga.
Pindura Nicanor Rodil
Yakagadziridzwa ruzivo. Edza zvakare.